Wakiilkii Qaramada Midobay ee Soomaaliya laga eryay oo khudbad u jeediyay golaha Qm. – The Voice of Northeastern Kenya
Wakiilkii Qaramada Midobay ee Soomaaliya laga eryay oo khudbad u jeediyay golaha Qm.
Wakiilkii gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsanaa arimaha dalka Soomaaliya ee kowdii bishaan Soomaaliya laga eryay Nicholas Haysom ayaa Khudbad u jeediyay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey,wuxuuna kaga hadlay Xaaladda Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay in markii uu Soomaaliya tagay 3-dii October ay si Wanaagsan u soo dhaweeyeen saraakiil sar sare oo katrisan dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada.
Wakiilka ayaa sheegay inay Soomaaliya u socoto dhanka Wanaagsan, balse isku dhacyada siyaasadeed ay keeni karaan inay waddadaas ka weecato.
Waxa uu sheegay inuu aad ula dhacaysan yahay qorsheyaasha isbaddalada waqtiga dheer ee Xukuumadda Soomaaliya iyo sida ay uga go’antahay inay u fuliso qaab ficil ah ayadoo adeegsanaysa hannaankii lagu gaari lahaa dhabahaasi.
Nicholas Haysom oo soo hadal qaaday maaliyadda Soomaaliya ayaa sheegay in Isbaddalada maaliyadda iyo ballaarinta dakhliga gudaha ee lagu kordhiyay 8-da milyan ee dollar bishii September ay ka dhigan tahay in boqolkiiba 56 miisnaaiyadda dawladda federalka Soomaaliya ay ka imaanayso dakhliga gudaha oo gaaraya 340 milyan kaasoo sanadkaan 2019 kasoo xaroon doona gudaha dalka halka inta kalena ay bixin doonaan deeq bixiyeyaasha Soomaaliya taageera.
Ayadoo ay jiraan isbaddalladaas wanaagsan ayuu sheegay in ismariwaaga u dhexeeya dawladda federaalka iyo maamulada xubnaha ka ah uu curyaamin karo in la garto nooca federaal ee uu dalka Soomaaliya qaadanayo iyo hirgalinta qorshaha dhisidda ciidan qaran oo hanta ammaanka dalkooda Hooyo.
Waxa uu sheegay inay booqdeen dhammaan gobolada Soomaaliya, ayna jireen hindiseyaal dhiirri galin leh oo lagu doonayo in lagusoo celiyo calaaqaadka wanaagsan ,isagoo sheegay inay suuro galtahay in xaaladda dalka ay cakirto hannaanka doorashooyinka ee ka dhacaya dhowr kamid ah dawlad goboleedyada.
Waxa uu tusaale u soo qaatay doorashadii maamulka Koonfur Galbeed, oo uu sheegay in eedaymaha la xiriira faragalinta dawladda dhexe iyo rabshadaha halkaas ka dhacay ee ka dhashay xariggii ku xigeenkii hore ee Alshabaab aaanay wanaag u horseedayn doorashooyinka kale ee mustaqbalka ka dhacaya gobollada Soomaaliya iyo tan qaranka.
Nicholas Haysom wuxuu sheegay in Sida loo maamulo doorashooyinka soo socda iyo hannaanka siyaasadda ee harsan, gaar ahaan dib u eegista dastuurka ay go’aamin doonto in Soomaaliya ay hormar kale ku tallaabsato iyo in kale.
← Agaasimaha dacwad soo oogidda oo doonayo in 22 sano la xiro eedeysane lala xariiriyay daroogada
DHAGEYSO:Bulshada ku nool Lagdera oo codsi dirsaday →